Home Wararka Farmaajo oo caawa afka furtay: “Eelaay” miyaa hadda damacday in ay na...
Farmaajo oo caawa afka furtay: “Eelaay” miyaa hadda damacday in ay na horistaagto”.
Ka dib markii Gudoomiyaha Baarlamaanka soo saaray qoraal uu uga soo horjeestay ga’aankii lagu kala direy Gudiga Maaliyadda iyo isla xisaabtanka ee Baarlamaanka isla markaana uu ugu digay dowlada in ay faraha la gasho howlaha Baarlamaanka ayaa waxa uu MW Farmaajo bilaabay walwal iyo jahawareer.
Kulamo uu caawa uu la qaatay qaar ka mida kooxdiisa ayuu ku sheegay dareenka uu ka qabo go’aanka uu qaatay Gudoomiye Mursal. Farmaajo oo aad u xanaaqsan ayaa u ku goodiyay in Gudmoomiye Mursal uu ka shalaay doono go’aanka uu uga soo horjeestay Xukumaada.
Farmaajo ayaa caawa u sheegay saaxibadiisa in ay tahay waxa aan la qaadan karin in go’aankiisa la hor istaago. Waxa uu yir ” ma hada ayaa “Eelaay” damacday in ay horistaagto ajanadaha dowaladda”, Farmaajo oo u muuqada mid yasaya beesha Digil iyo Mirrifle ayaa yiri ” war kuwii awooda is biday (Abgaal iyo Habargedir) ayaan albabaada ka soo xirnay oo ay kibarkoodii la soo afjaray ma hadda ayaa Eelaay damac soo galay”.
Farmaajo iyo kooxdiisa ayaa caawa go’aansaday in ay bilaabaan moonshin looga soo horjeedo Gudoomiye Mursal, lacag kasta ee ku baxaysana lagu bixiyo.
Previous articleMW Farmaajo iyo RW Kheyre oo lacag kala baxay Bangiga Dhexe
Next articleDhowr qodob oo Dastuurka ka mid ah oo wax laga bedelay (VIDEO)
Qarax ka dhacay Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay [SAWIRO]
Cabdi Xaashi & Wiilkiisa oo lagu eedeeyay in ay Fahad u...